Karàna - Wikipedia
Ny Karàna dia ireo Indiana sy Pakistaney izay nifindra monina eto Madagasikara nanomboka tamin' ny faramparan' ny taonjato faha-17. Amin' ny heviny mifintina dia ireo Indiana eto Madagasikara ihany no lazaina fa Karàna, fa amin' ny heviny mivelatra kosa dia mahafaoka ny Indiana sy ny Pakistaney any India sy Pakistàna na any amin' ny firenena hafa koa ny teny hoe Karàna. Miisa eo amin' ny 25 000 eo ho eo ny Karàna eto Madagasikara araka ny antontanisan' ny Ministeran' ny raharaham-bahiny indiana. Ny teny hoe Karàna dia mety avy amin' ny teny sanskrita hoe karan na ny teny hindý hoe Karânî (na Kirânî), izay ampiasaina ao India hanondroana ny mpitan-tsoratra manoratra amin' ny teny anglisy.
Ny ankamaroan' ireo Karàna tonga teto Madagasikara dia manaraka ny fivavahana silamo siita sady avy any Gujerat, faritra any amin' ny tapany avaratra-andrefan' i India.
↑ Christelle Charrier, « Quelques éléments de connaissance sur la culture "karana" » [tahiry], sur aefe-ien-madagascar.mg, AEFE–Réseau des écoles à programme français–Océan indien (nojerena tamin'ny 2 Marsa 2017)
↑ Philippe Pratx, "Indo-Musulmans" [tahiry], ao amin'ny indereunion.net (nojerena tamin'ny 2 Marsa 2017)
↑ Jacques Lombard, "S. Blanchy, Karana et Banians. Les communautés commerçantes d'origine indienne à Madagascar [compte rendu" [tahiry], sur persee.fr (nojerena tamin'ny 2 Marsa 2017)
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Karàna&oldid=1011017"
Voaova farany tamin'ny 25 Aprily 2021 amin'ny 11:37 ity pejy ity.